China Professional Spark Plug ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု | 1D;ONE
1D; China Professional Spark Plug ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 အရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရှင်များ, ISO / TSL6949-2002, ISO-2015 အတည်ပြုထားသော ISO / TSL6949-2002 အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။
Spark Plug ဖွဲ့စည်းပုံ
1. သံမဏိအခွံ - သံမဏိအဆင်သင့်၏အောက်ပိုင်းသည်ဆလင်ဒါခေါင်း၏မီးပွား plug နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်အသုံးပြုသည်။ မီးပွား plug ကိုတင်းကျပ်သို့မဟုတ်ဝက်အူထွက် screw မှလက်ကို plug ။
2. သတ္တုလှံတံသည်ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ သတ္တုလှံတံ၏အနိမ့်ဆုံးအဆုံးသည် Central Electrope ၏အစွန်အဖျား၏အထက်ပိုင်းအဆုံးနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်။
3. သံမဏိအခွံနှင့်ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုစွမ်းအင်ဖြည့်တင်းရန်အတွက်သံမဏိခွံနှင့်ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းအကြားမြင့်မားသော Alumina ကြွေထည်များနှင့်ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုစီစဉ်သည်။
2012 ခုနှစ်, 2012 ခုနှစ်, 1D Auto အစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD, ပုံမှန်လက်ကမ်းစာကားသည်ဆလင်ဒါလက်ကိုင်တစ်လုံး၏ကြီးမားသောပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ မိတ္တူကူးခြင်းကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှစံပုံစံများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့်ချီးကျူးသည်။ ၎င်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်တင်းမာမှုများကိုစစ်ဆေးသည်။